Daryeelka Haween-wanaagga ee Columbus, OH | Caafimaadka PW
Daryeelka Haweenka-Fiican ee Columbus, OH
Waa maxay Daryeel-Haween Wanaagsan?
Daryeelka haweeneyda wanaagsan ayaa fure u ah maareynta caafimaadka iyo ogaanshaha cudurrada iyo ka hortagga inta aad nooshahay. Imtixaanka haweeneyda wanaagsan waa wakhti ku habboon bixiyaha xanaanada caafimaadkaaga si uu kaaga baadho dhibaatooyinka caafimaadka taranka ee iman kara, uga jawaabo su'aalahaaga, oo uu kala hadlo welwelkaaga. Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka ee Columbus, OH, waxay hoy u tahay koox karti leh oo ka kooban OB/GYNs, kalkaaliyeyaal caafimaad, umulisooyin, iyo kalkaalisooyin caafimaad oo takhasus leh, kuwaas oo si buuxda ugu heellan xaqiijinta in bukaannadayadu helaan daryeelka ugu wanaagsan ee suurtogalka ah.
Waa maxay Adeegyada Sameeya Imtixaanka Naag-wanaagsan?
Imtixaanka naagta wanaagsan sida caadiga ah waxaa ku jira qaybaha soo socda:
Taariikhda Aasaasiga ah iyo JirkaBukaan-socodka waxaa la weydiin doonaa dhowr su'aalood oo ku saabsan galmoodkooda, caafimaadkooda, iyo taariikhda qoyskooda ka hor inta aysan sameynin baaritaan jireed oo aasaasi ah si loo hubiyo caafimaadkooda guud. Waxaa ka mid ah cabbirka miisaanka iyo cadaadiska dhiigga, maadaama ay saameyn ku yeelan karaan wareegga caadada, uurka, iyo ka hortagga uurka ama doorashooyinka beddelka hormoonnada.
Dib u eegista Daawooyinka: Bixiyaha xanaanada caafimaadkaaga ayaa baari doona daawo kasta, geedo yaryar, iyo/ama kaabis kasta oo aad qaadanayso si looga hadlo baahida dawooyinka cusub ama dib loo buuxiyey.
Baaritaanka Naasaha: Kormeer iyo cadaadin lagu sameeyo naasahaaga iyo kilkilooyinkaaga iyadoo gacmahaagu ay ku jiraan meelo kala duwan.
Imtixaanka Miskaha oo Lagu Sameeyo Baaritaanka Pap: Baarista xubnahaaga taranka ee dhibaatooyinka iyo calaamadaha kansarka ilmo-galeenka.
La talinta ka hortagga uurkaDood ku saabsan, haddii ay jiraan, ka-hortagga uur-qaadidda ee aad rabto inaad isticmaasho.
Menopause iyo La-talinta Nolosha DhexeHaddii aad ka weyn tahay da'da 45 ama aad leedahay calaamadaha perimenopause, bixiyaha xanaanada caafimaadkaaga waa inuu ka wada hadlaa khatarta iyo faa'iidooyinka isticmaalkaaga daaweynta beddelka hormoonka (HRT) si loo soo celiyo estrogen iyo progesterone ee hoos u dhigaya menopause. Waa inay sidoo kale ka hadlaan caadooyinka qaab nololeedka ee saameeya xilliga kala-guurka perimenopause.
Tijaabada Shaybaadhka: Baadhitaannada kaadida iyo dhiigga caadiga ah ayaa laga yaabaa in la sameeyo.
Su'aalaha la is weydiiyo ee daryeelka dumarka wanaagsan
Maxaa dhacaya inta lagu jiro baaritaanka miskaha?
Baaritaanka miskaha waxaa sameeya khabiir u tababaran oo ka tirsan Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka taasoo qayb ka ah baaritaanka caafimaadka caadiga ah. Imtixaankan waxaa ka mid ah hubinta qaabka gudaha iyo dibadda ee xubnaha taranka haweeneyda iyadoo la isticmaalayo qalab gaar ah. Baaritaanka Pap smear ayaa sidoo kale la sameeyaa si muunada unugyada afka ilmo-galeenka looga soo qaado, ka dibna loo diro shaybaar si loo baaro.
Waa maxay nooca ka hortagga uurka ee aan isticmaalo?
Waxaa jira ka-hortag uur-qaadyo badan oo kala duwan oo la heli karo, oo ay ku jiraan xakameynta dhalmada hormoonka ku saleysan iyo aaladaha intrauterine (IUDs). Nooca ka hortagga uurka ee adiga kugu habboon waxay ku xiran tahay arrimo ay ka mid yihiin caafimaadkaaga, da'daada, heerka dhaqdhaqaaqa galmada, iyo haddii aad qorsheyneyso inaad uur yeelato mustaqbalka dhow. Shaqaalaheenu waxay si buuxda u eegi karaan doorashooyinkan inta lagu jiro wadatashiga.
Dumarka aan caadadu dhicin 12 bilood ayaa laga yaabaa inay la kulmaan menopause, taas oo ay calaamad u tahay hoos u dhaca soo saarista estrogen iyo hormoonnada kale. Calaamadaha caanka ah waxaa ka mid ah kulaylka kulul, niyadda oo beddesha, hurdo la'aan, iyo qallayl siilka ama cuncun. Waayo-aragnimada haweeney kasta ee menopause waa mid gaar ah, marka waa muhiim inaad kala hadasho kooxdayada Columbus, OH, wixii walaac ah.
Xakameyso Caafimaadkaada Dumarka
Imtixaanada dumarka fayoobaanta waa mid ka mid ah siyaalo badan oo lagu hubiyo in jidhkaagu u shaqeeyo sida saxda ah ee ay tahay inuu u shaqeeyo. Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka, waxaan rabnaa mid kasta iyo mid kasta oo bukaannadayada ka mid ah inay si buuxda ugu raaxaystaan ​​inay ka hadlaan arrimo kasta oo ay qabaan si loo hubiyo inaan si sax ah oo waxtar leh u daaweyn karno. La xidhiidh xaruntayada Columbus, OH, maanta si aad u ballansato imtixaankaaga naag wanaagsan.